Infinitive လိုက်သည့်ကြိယာများ - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on October 3, 2013 at 9:51 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Infinitive ဆိုသည်မှာ ကြိယာတစ်ခု၏အခြေခံပုံစံဖြစ်သည်။ to ၏နောက်တွင် infinitive လိုက်သည့် ကြိယာများရှိသည်။ “လုပ်ဖို့” “လုပ်ရန်” “ဖြစ်ဖို့” စသည်အဓိပ္ပါယ်များနှင့်ပြောသည်။ မြန်မာကျောင်းသားအများစုက to + V1 ဟုသိထားကြသည်။ ၄င်းတို့သည် ကျောင်းသားများအားစိတ်ရှုပ်ထွေးစေသည့်ကြိယာများဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ၄င်းတို့အား မည်ကဲ့သို့သုံးကြောင်းသိထားပါက မှားယွင်းမှုနည်းမည်ဟုယူဆရပါသည်။ အောက်ပါစာရင်းသည် ရည်ညွှန်းးရလွယ်ကူစေရန်အတွက်သာ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည်။ အလွတ်ကျက်မှတ်ရန်မတိုက်တွန်းလိုပါ။
1. would like I'D LIKE TO SEE Paris someday.
2. want I WANT TO START dinner, and I want you to help me.
ညစာ စပြင်ဆင်ချင်ပြီ။ ပြီးတော့မင်းကိုကူညီစေချင်တယ်။
3. wish I WISH TO MAKEacomplaint. Your service is terrible.
တစ်ခုလောက်တိုင်ချင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ဝန်ဆောင်မှုက အရမ်းညံ့တယ်။
4. long She LONGS TO SEE her children again. They're in Peru.
သူ့ကလေးတွေကို ထပ်တွေ့ဖို့တမ်းတတယ်။ သူတို့ ကပီရူးမှာ။
5. need I NEED TO DO the laundry. I have no clean shirts.
6. have I'd like to stay, but I can't. I HAVE TO GO now.
နေချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်မဖြစ်ဘူး။ အခုသွားရဦးမယ်။
7. expect I EXPECT TO FINISH it today. I'm almost sure I will.
8. hope I really HOPE TO FINISH today, but I'm not sure I can.
ဒီနေ့ပြီးဖို့တကယ်မျှော်လင့်တယ်။ ဒါပေမယ့် လုပ်နိုင်ပါ့မလား မသေချာဘူး။
9. plan She PLANS TO VISIT her mother after work.
10. agree She AGREED NOT TO SEE other men and TO DATE only him.
တခြားယောက်ျားတွေနဲ့မတွေ့ဖို့၊ သူနဲ့သာတွဲဖို့ သူမကသဘောတူတယ်။
11. arrange Can you ARRANGE TO MEET me at the airport next week?
နောက်တစ်ပတ် ငါနဲ့လေဆိပ်မှာလာတွေ့ဖို့ စီစဉ်နိုင်မလား။
12. intend I INTEND TO FINISH this report no later than Friday!
13. mean I DIDN'T MEAN TO KILL him. It was an accident!
ငါသူ့ကိုသတ်ဖို့မရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါ မတော်တဆပါ။
14. decide We DECIDED NOT TO GO out but TO STAY home and watch TV.
ကျွန်တော်တို့ အပြင်မထွက်ဘဲ အိမ်မှာနေပြီး ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။
15. choose Mother, I'll marry whoever I CHOOSE TO MARRY!
အမေ ကျွန်တော်လက်ထပ်ဖို့ရွေးတဲ့ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်လက်ထပ်မယ်။
16. tend I TEND TO SCREAM when I'm angry. That's my bad habit.
ကျွန်တော်က ဒေါသထွက်ရင် အော်တတ်တယ်။ ဒါ ကျွန်တော့်ရဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်ဘဲ။
17. try TRY TO ANSWER every question. You have 60 minutes.
မေးခွန်းအားလုံးဖြေဖို့ကျိုးစားပါ။ အချိန် မိနစ် ၆၀ ရတယ်။
(သို့ရာတွင် စိတ်ကူးသစ်၊ အကြံသစ်တွေစမ်းကြည့်သည် ဆိုလျှင်တော့ ing ပုံစံဖြင့်သုံးနိုင်သည်။
If your clothes aren't white enough, TRY USING bleach.
18. attempt We ATTEMPTED TO REACH him by phone, but he wasn't home.
သူ့ကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူအိမ်မှာမရှိနေဘူး။
19. forget DON'T FORGET TO SEND your motherabirthday card.
20. fail Don't FAIL TO LOCK the door if you leave the house!
21. remember DID you REMEMBER TO TURN OFF the TV when you left?
I REMEMBER SITTING on my mama's lap when I was four.
လေးနှစ်သားတုန်းက အမေ့ပေါင်ပေါ်မှာထိုင်ခဲ့တာကို သတိရတယ်။
22. offer He OFFERED TO LEND me $100, but I didn't need it.
သူငါ့ကိုဒေါ်လာတစ်ရာချေးပေးမယ်လို့ပြောသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါမလိုပါဘူး။
23. promise He PROMISED TO BUY heracar if she got her license.
သူက သူမယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရရင် ကားတစ်စီးဝယ်ပေးမယ်လို့ ကတိပေးခဲ့တယ်။
24. threaten She THREATENED TO HIT her son if he didn't stop crying.
ငိုတာမရပ်ဘူးဆိုရင် ရိုက်မယ်လို့ သူ့သားကိုခြိမ်းခြောက်ခဲ့တယ်။
25. prepare I covered the floor because I'm PREPARING TO PAINT here.
26. hesitate I HESITATED TO ASK him for help because he was so busy.
သူကအလုပ်များလွန်းနေလို့ သူ့အကူအညီတောင်းဖို့ ချီတုံချတုံဖြစ်နေခဲ့တယ်။
27. refuse My father REFUSED TO GIVE me money. He wouldn't help.
28. seem The dog SEEMS TO BE hungry. Try giving it some food.
29. appear She APPEARS TO BE happy. See? She's smiling.
သူမပျော်နေပုံပဲ။ တွေ့လား။ သူမပြုံးနေတယ်။
30. deserve You've worked very hard. You DESERVE TO GETaraise.
မင်းအလုပ်ကြိုးစားခဲ့တယ်။ မင်း လစာတိုးဖို့ထိုက်တန်တယ်။ (လစာတိုးရသင့်တယ်)
31. afford We CAN'T AFFORD TO BUYacar now. We're broke.
32. manage DID you MANAGE TO FIND his house using the map I drew?
ငါဆွဲပေးတဲ့မြေပုံနဲ့ သူ့အိမ်ကိုရှာတွေ့ခဲ့လား။ (တစ်ခုခုကို ခက်သည့်ကြားက ပြီးအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။)
33. pretend He PRETENDED TO BEarich banker, and she believed him!
သူက ဘဏ်သူဌေးတစ်ယောက်လိုဟန်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူမကလည်းယုံခဲ့သည်။
34. learn (how) I LEARNED TO SWIM before I LEARNED HOW TO WALK.
အောက်ပါကြိယာတို့သည် TO သို့မဟုတ် NOT TO ရှေ့တွင် indirect object လိုအပ်သည်။
35. ask He ASKED ME TO HELP him paint his house.
36. beg She BEGGED HER HUSBAND TO STOP seeing other women.
သူမသည် ခင်ပွန်းဖြစ်သူအား တခြားမိန်းကလေးများနှင့်မရှုပ်ရန် တောင်းပန်ခဲ့သည်။
37. tell I TOLD HIM TO WORK harder and NOT TO TALK so much.
သူ့ကို စကားအများကြီးမပြောဖို့နဲ့ အလုပ်ကြိုးစားဖို့ ပြောခဲ့တယ်။
38. order He ORDERED THEM TO DROP their guns and NOT TO MOVE.
သူတို့သေနတ်တွေချပြီး မလှုပ်ဖို့ သူက အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။
39. command The sergeant COMMANDED HIS MEN TO MARCH twenty miles.
တပ်ကြပ်ကြီးသည် သူ့ရဲဘော်များအား မိုင်နှစ်ဆယ်ချီတက်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။
40. require The college REQUIRES YOU TO TAKEawriting course.
41. allow They DON'T ALLOW YOU TO SMOKE in the building. Go outside.
42. permit He PERMITTED HIS DAUGHTER TO STAY out as late as she wanted.
43. forbid She FORBADE HER SON TO SMOKE. She threw out his cigarettes.
44. convince He CONVINCED ME TO VOTE for Clinton. He gave me good reasons.
သူကကျွန်တော့်အား ကလင်တန်ကိုမဲထည့်ဖို့ဆွယ်သည်။ အကြောင်းပြချက်ကောင်းတွေလည်းပေးသည်။
45. persuade He PERSUADED MARY TO MARRY him by promising to be faithful.
သူကမေရီအား သစ္စာရှိပါမယ်လို့ကတိပေးပြီး သူ့ကိုလပ်ထပ်ရန်စည်းရုံးသည်။
46. pay He PAID ROBERT $20 TO CLEAN his yard and SWEEP the floor.
သူကရောဘတ်အား ခြံရှင်းပေးရန်နှင့် ကြမ်းတံမြက်စီးလှည်းပေးရန် ဒေါ်လာ ၂၀ ပေးသည်။
47. hire They HIRED MRS. Brown TO ANSWER phones and DO filing.
မစ္စစ်ဘရောင်းကို တယ်လီဖုန်းဖြေဖို့နှင့် ဖိုင်သိမ်းဖို့ ငှားရမ်းခဲ့သည်။
48. dare They DARED ME TO DRIVE 90 mph. I did it to prove I was brave.
သူတို့ကငါ့ကို တစ်နာရီ မိုင် ၉၀ မောင်းဖို့စိန်ခေါ်တယ်။ ငါကလည်း သတ္တိရှိကြောင်းပြရန် မောင်းပြခဲ့တယ်။
49. invite He INVITED ME TO GO with him and his family to the zoo.
50. warn She WARNED HIM TO STAY away from the dog and NOT TO TOUCH it.
သူက ကျွန်တော့်ကို ခွေးကိုမကိုင်ဖို့နှင့် ခပ်ဝေးဝေးမှာနေဖို့ သတိပေးသည်။
51. encourage My music teacher ENCOURAGED ME TO JOIN the school band.
ကျွန်တော့်ဂီတဆရာက ကျောင်းတီးဝိုင်းအဖွဲ့ကိုဝင်ဖို့ အားပေးတယ်။
52. challenge He CHALLENGED THE MEN TO WORK faster to meet the deadline.
သူက သတ်မှတ်ကာလအတွင်းအလုပ်ပြီးရန် အလုပ်ပိုမြန်မြန်လုပ်ဖို့ ထိုလူကိုစိန်ခေါ်ခဲ့သည်။
အထက်ပါကြိယာတို့အပြင် “ကံထူးသူ ၇ ဦး” ဆိုသည့် နောက်က infinitive ကော၊ ing ပုံစံပါလိုက်လို့ရသည့် စကားလုံးခုနှစ်လုံးရှိပါသေးသည်။ သူတို့မှာ
like, hate, love, start, begin, continue, can’t stand (or can’t bear) တို့ဖြစ်သည်။
မူရင်း Prof. Rick Shur' ၏ handout များမှ
Infinitive ဆိုသညျမှာ ကွိယာတဈခု၏အခွခေံပုံစံဖွဈသညျ။ to ၏နောကျတှငျ infinitive လိုကျသညျ့ ကွိယာမြားရှိသညျ။ “လုပျဖို့” “လုပျရနျ” “ဖွဈဖို့” စသညျအဓိပ်ပါယျမြားနှငျ့ပွောသညျ။ မွနျမာကြောငျးသားအမြားစုက to + V1 ဟုသိထားကွသညျ။ ၄ငျးတို့သညျ ကြောငျးသားမြားအားစိတျရှုပျထှေးစသေညျ့ကွိယာမြားဖွဈသညျ။ သို့ရာတှငျ ၄ငျးတို့အား မညျကဲ့သို့သုံးကွောငျးသိထားပါက မှားယှငျးမှုနညျးမညျဟုယူဆရပါသညျ။ အောကျပါစာရငျးသညျ ရညျညှနျးးရလှယျကူစရေနျအတှကျသာ ပွုစုထားခွငျးဖွဈသညျ။ အလှတျကကျြမှတျရနျမတိုကျတှနျးလိုပါ။
ညစာ စပွငျဆငျခငျြပွီ။ ပွီးတော့မငျးကိုကူညီစခေငျြတယျ။
တဈခုလောကျတိုငျခငျြပါတယျ။ ခငျဗြားတို့ဝနျဆောငျမှုက အရမျးညံ့တယျ။
သူ့ကလေးတှကေို ထပျတှဖေို့တမျးတတယျ။ သူတို့ ကပီရူးမှာ။
နခေငျြပါတယျ။ ဒါပမေယျ့မဖွဈဘူး။ အခုသှားရဦးမယျ။
ဒီနပွေီ့းဖို့တကယျမြှျောလငျ့တယျ။ ဒါပမေယျ့ လုပျနိုငျပါ့မလား မသခြောဘူး။
တခွားယောကျြားတှနေဲ့မတှဖေို့၊ သူနဲ့သာတှဲဖို့ သူမကသဘောတူတယျ။
နောကျတဈပတျ ငါနဲ့လဆေိပျမှာလာတှဖေို့ စီစဉျနိုငျမလား။
ငါသူ့ကိုသတျဖို့မရညျရှယျခဲ့ပါဘူး။ ဒါ မတျောတဆပါ။
ကြှနျတျောတို့ အပွငျမထှကျဘဲ အိမျမှာနပွေီး ရုပျမွငျသံကွားကွညျ့ဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့တယျ။
အမေ ကြှနျတျောလကျထပျဖို့ရှေးတဲ့ဘယျသူဖွဈဖွဈ ကြှနျတျောလကျထပျမယျ။
ကြှနျတျောက ဒေါသထှကျရငျ အျောတတျတယျ။ ဒါ ကြှနျတေျာ့ရဲ့မကောငျးတဲ့အကငျြ့ဘဲ။
မေးခှနျးအားလုံးဖွဖေို့ကြိုးစားပါ။ အခြိနျ မိနဈ ၆၀ ရတယျ။
(သို့ရာတှငျ စိတျကူးသဈ၊ အကွံသဈတှစေမျးကွညျ့သညျ ဆိုလြှငျတော့ ing ပုံစံဖွငျ့သုံးနိုငျသညျ။
သူ့ကိုဖုနျးနဲ့ဆကျသှယျဖို့ကွိုးစားခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူအိမျမှာမရှိနဘေူး။
လေးနှဈသားတုနျးက အမပေ့ေါငျပျေါမှာထိုငျခဲ့တာကို သတိရတယျ။
သူငါ့ကိုဒျေါလာတဈရာခြေးပေးမယျလို့ပွောသေးတယျ။ ဒါပမေယျ့ ငါမလိုပါဘူး။
သူက သူမယာဉျမောငျးလိုငျစငျရရငျ ကားတဈစီးဝယျပေးမယျလို့ ကတိပေးခဲ့တယျ။
ငိုတာမရပျဘူးဆိုရငျ ရိုကျမယျလို့ သူ့သားကိုခွိမျးခွောကျခဲ့တယျ။
သူကအလုပျမြားလှနျးနလေို့ သူ့အကူအညီတောငျးဖို့ ခြီတုံခတြုံဖွဈနခေဲ့တယျ။
သူမပြျောနပေုံပဲ။ တှလေ့ား။ သူမပွုံးနတေယျ။
မငျးအလုပျကွိုးစားခဲ့တယျ။ မငျး လစာတိုးဖို့ထိုကျတနျတယျ။ (လစာတိုးရသငျ့တယျ)
ငါဆှဲပေးတဲ့မွပေုံနဲ့ သူ့အိမျကိုရှာတှခေဲ့လား။ (တဈခုခုကို ခကျသညျ့ကွားက ပွီးအောငျလုပျဆောငျနိုငျသညျ။)
သူက ဘဏျသူဌေးတဈယောကျလိုဟနျဆောငျခဲ့သညျ။ သူမကလညျးယုံခဲ့သညျ။
အောကျပါကွိယာတို့သညျ TO သို့မဟုတျ NOT TO ရှတှေ့ငျ indirect object လိုအပျသညျ။
သူမသညျ ခငျပှနျးဖွဈသူအား တခွားမိနျးကလေးမြားနှငျ့မရှုပျရနျ တောငျးပနျခဲ့သညျ။
သူ့ကို စကားအမြားကွီးမပွောဖို့နဲ့ အလုပျကွိုးစားဖို့ ပွောခဲ့တယျ။
သူတို့သနေတျတှခေပြွီး မလှုပျဖို့ သူက အမိနျ့ပေးခဲ့တယျ။
တပျကွပျကွီးသညျ သူ့ရဲဘျောမြားအား မိုငျနှဈဆယျခြီတကျရနျ အမိနျ့ပေးခဲ့သညျ။
သူကကြှနျတေျာ့အား ကလငျတနျကိုမဲထညျ့ဖို့ဆှယျသညျ။ အကွောငျးပွခကျြကောငျးတှလေညျးပေးသညျ။
သူကမရေီအား သစ်စာရှိပါမယျလို့ကတိပေးပွီး သူ့ကိုလပျထပျရနျစညျးရုံးသညျ။
သူကရောဘတျအား ခွံရှငျးပေးရနျနှငျ့ ကွမျးတံမွကျစီးလှညျးပေးရနျ ဒျေါလာ ၂၀ ပေးသညျ။
မစ်စဈဘရောငျးကို တယျလီဖုနျးဖွဖေို့နှငျ့ ဖိုငျသိမျးဖို့ ငှားရမျးခဲ့သညျ။
သူတို့ကငါ့ကို တဈနာရီ မိုငျ ၉၀ မောငျးဖို့စိနျချေါတယျ။ ငါကလညျး သတ်တိရှိကွောငျးပွရနျ မောငျးပွခဲ့တယျ။
သူက ကြှနျတေျာ့ကို ခှေးကိုမကိုငျဖို့နှငျ့ ခပျဝေးဝေးမှာနဖေို့ သတိပေးသညျ။
ကြှနျတေျာ့ဂီတဆရာက ကြောငျးတီးဝိုငျးအဖှဲ့ကိုဝငျဖို့ အားပေးတယျ။
သူက သတျမှတျကာလအတှငျးအလုပျပွီးရနျ အလုပျပိုမွနျမွနျလုပျဖို့ ထိုလူကိုစိနျချေါခဲ့သညျ။
အထကျပါကွိယာတို့အပွငျ “ကံထူးသူ ၇ ဦး” ဆိုသညျ့ နောကျက infinitive ကော၊ ing ပုံစံပါလိုကျလို့ရသညျ့ စကားလုံးခုနှဈလုံးရှိပါသေးသညျ။ သူတို့မှာ
like, hate, love, start, begin, continue, can’t stand (or can’t bear) တို့ဖွဈသညျ။
မူရငျး Prof. Rick Shur' ၏ handout မြားမှ
Permalink Reply by Nang Aye Hnin Phyu on October 3, 2013 at 17:35
I like the way you say .. kan htoo thu7oo .. it helps me remember the words .. thanks for sharing!
Permalink Reply by myatmyatsoe on October 3, 2013 at 18:08
Hypotheticals / Conditionals နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့အကြောင်းလေးတွေ သိချင်ပါတယ်
Permalink Reply by than zaw oo on October 3, 2013 at 23:03
ပို့ပေးတဲအတွက်ကျေးဇူးတင် တယ်နှောင် လည်းပို ပေးပါ။
Permalink Reply by Po Po MInn on October 8, 2013 at 14:57
Permalink Reply by Yu Yu Thaw on October 14, 2013 at 10:14
Very thankful for your sharing.May I know more.........
Permalink Reply by ဇွန်ဇွန် on October 25, 2013 at 16:42
Thank you so much ..This lesson makes it easy to remember when I use this pattern.